२० औँ पटक आमा बन्दैछिन् ३८ वर्षीया महिला | ईमाउण्टेन समाचार
२० औँ पटक आमा बन्दैछिन् ३८ वर्षीया महिला
असोज ९, २०७६ पढ्न २ मिनेट
एजेन्सी, ९ असोज । एकजना महिला जीवनमा कतिपटक आमा बन्न सक्लिन् ? तर, भारतमा एकजना महिलाले २० औँ बच्चा जन्माउँदै छिन् ।
महाराष्ट्रको बिड जिल्लास्थित केसापुर गाउँमा बस्ने लंकाबाई नामकी ती महिला २० औँ पटक आमा बन्न लागेकी हुन् । अहिले ती महिलाको पेटमा ७ महिनाको गर्भ रहेको छ ।
उनले यसअघि १९ पटक बच्चा जन्माइसकेकी भएपनि अहिले केवल ११ वटा छोराछोरी मात्रै जिवित छन् । उनको उमेरचाहिँ ३८ वर्षको छ ।
सरकारी अस्पतालमा गराइएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा लंकाबाई र उनको पेटमा रहेको गर्भ स्वस्थ रहेको पाइएको छ ।
अनौठो त के भने उनी यसअघि १९ पटक गर्भवती हुँदा कहिल्यैपनि अस्पताल आएकी थिइनन् र घरमै बच्चा पाएकी थिइन् । उनले २० औँ गर्भमा पहिलोपटक अस्पताल टेकेकी हुन् । उनलाई यो पटक अस्पतालमै भर्ना गरेर सुत्केरी गराउने तयारी छ ।
निकै गरीब परिवारकी लंकाबाईको परिवारका सदस्यहरु भिख माग्ने तथा मजदूर गर्ने काम गर्दछन् । उनीहरु एकठाउँमा नबसी फिरन्ते जीवन बिताइरहेका छन् ।
यस्तो कम्पनी जहाँ कर्मचारीले आफ्नो तलब तथा सुविधा आफैं तोक्छन्
मोदीको ८ सयको गम्छा ११ करोडमा बिक्यो ?
नाग्म बजारमा भिषण पहिरोः एक बालकको मृत्यु, २ महिलाको उद्दार
कोरोनाको हब बन्दै सुर्खेत, बिहीबार मात्रै थपिए १८ संक्रमित
शिक्षाको अन्यौल चिर्ने कसरी ?
महिला बिग ब्यास क्रिकेट अर्काे महिना देखि सुरु